Ogaden News Agency (ONA) – M/Weyne Obama ma ogyahay : Dameer iyo Labadiisa Dhagood inay yihiin Argagixisada LRA ee Uganda iyo Liyu Booliska Itobiya
M/Weyne Obama ma ogyahay : Dameer iyo Labadiisa Dhagood inay yihiin Argagixisada LRA ee Uganda iyo Liyu Booliska Itobiya
Posted by ONA Admin	/ September 26, 2013
Laynta iyo xasuuq dadka shacabka meel kasta oy joogaan waa ka dambi dagaal iyo mid laga galay xaquuqda aadanaha ee ku xusan xeerarka caalamiga ah. khudbad dheer oo M/weynaha Mareykanka uu furitaankii shirweynaha Golaha loo dhanyahay ee QM uu ka jeediyay (Halkan ka Akhri), wuxuu ku sheegay in loo baahanyahay fikrad cusub iyo go’aan qaadasho adag inuu caalamka ka gaadho xasuuqa loo gaysto dadka shacabka ah. Asagoo arintaa ka hadlaya ayuu M/weyne Obama wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay inay iska kaashanayaan dalal ka mid ah kuwa Afrika sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah ee Uganda argagixisada LRA.
Waa arin aad loo soo dhaweeyo in la qiimeeyo dhiiga dadka Afrikaanka ah ee sida bahalnimada ah loogu laynayo meela kala duwan, hasa ahaatee in xasuuqa ay ciidamada Itobiya iyo maleesiyada ay ku shaqaysato ee loo yaqaano Liyu Boliska ka wadaan Ogadenya indhaha laga dabo oo laga soo qaado waxaan jirin waxay xaqiijinaysaa eedaymaha loo soo jeediyo dawladaha Waaweyn gaar ahaan kuwa reer galbeedka oo laba siyaabood oo kala duwan u qiimeeya dhacdooyinka iyagoo maslaxadooda ka eegaya. Itobiya waxaa indhaha looga dadbayaa dambiyada ay ka galayso shucuubta ay xooga ku haysato gaar ahaan Ogadenya maadaama ay isu muujiso inay tahay dawlad muhiim u ah istraatiijiyada reer Galbeedka gaar ahaan Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada Geeska Afrika arintaasoo ka soo horjeeda aragtida uu ka sheegay M/weyne Obam inuu aaminsan yahay markuu yidhi; ” .. waxaan aaminsanahay in dhamaan aadanaha ay siman yihiin, qofkastana uu leeyahay sharaf aan marnaba loo diidi karin.”
Xaqqa aay-katshiga shucuubta waa qodobka 1aad ee Qaramada Midoobay, mana ah in shacabka Somaliyeed ee Ogadenya doonista inay aayahooda ka tashadaan darteed loo xasuuqo, caalamkana indha ka laabto.
Waxaan aad u soo dhaweynaynaa khudabadii uu M/weyne Obama ka jeediyay Golaha loo dhanyahay ee QM, waxaanan ugu baaqaynaa in la baadho dambiyada laga galay shacabka S.Ogadenya taasoo caalamka indhiihiisa u furi doonta xasuuqa qarsoon ee ka socda halkaa.